Avo roa heny latsaka kely tamin’ny isan’ny tranga vaovao nampahafantarin’ny tetsy amin’ny CCO Covid 19 Ivato mantsy no tarehimarika navoakan’ny OMS nialohan’ny tamin’ny 5 ora hariva io omaly io. 67 isa ireo nolazainy fa tranga vaovao hita ho olona nitondra ny tsimokaretina Coronavirus eto Madagasikara, izany hoe, efa tafakatra 225 ireo marary sy avy nararin’izany eto amintsika. Nampifanarahan’izy ireo tamin’ny tarehimarika ofisialy napoitra tetsy amin’ny toeram-pibaikoana Ivato ihany moa izany ny hariva, izany hoe, tranga vaovao 35 isa ary marary sy avy narary miisa 193. Mba nifandiso koa izany ny fanomezam-baovaon’ny rafitra iraisam-pirenena. Mety ho inona no antony? F'angaha moa tsy avy ao amin'ny Institut Pasteur no maka ny vokatry ny fitiliana ny OMS tahaka ny ataon'ny CCO Covid 19 Ivato ihany, sa inona no nifandiso tao ?